जलवायु अनुकूलित खेतीमा उपाय खोज्दै रोल्पाका किसान - Kantipath.com
“पहिले गरिँदै आएको खेती प्रविधिलाई सुधार गरी खेतीपाती शुरु गरेका हौँ, कृषिमा अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरिने रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधिले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा समेत असर गरिरहेको हुँदा जलवायुमैत्री खेतीको शुरुआत गरेका छौँ”, सुनिलस्मृति–६ गजुलका अगुवा कृषक इन्द्रबहादुर थापाले भन्नुभयो ।
त्यसरी बनेको अँगारमा सूक्ष्म जीवाणुहरु बस्न सक्ने ठाउँ रहने भएकाले बोटबिरुवालाई फाइदा हुने गरेको कृषकको भनाइ छ । अँगारले पानी पनि सोस्ने भएकाले माटोमा आद्र्रता पनि रहिरहन्छ । गाईको मलमूत्र, भेली र बेसनको पीठो मिसाएर झोल मलसमेत प्रयोग हुँदै आएको छ । त्यस्तो मल किसानहरुले सात दिनमा तयार गर्छन् । त्यसरी बनेको मल हरेक बिरुवामा सिञ्चन गर्छन् । उनीहरुले कीटनाशक औषधिको सट्टा आफैँले तयार गरेको औषधि प्रयोग गर्छन् । तरकारी खेतीमा लाग्ने मित्र जीवलाई बचाएर शत्रु कीरो मार्न पानी पासो, बत्ती पासोलगायत विभिन्न पासो प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।
यस्तो प्रविधि प्रयोग गरेर आफूले उत्पादन गरेको जैविक तरकारी अन्य तरकारीभन्दा महँगो हुने हुँदा बजारमा केही समस्या हुने गरेको थापाको भनाइ छ । जैविक तरकारीका रूपमा प्रमाणीकरणसहित स्टिकर टाँसेर काठमाडाैँ आपूर्ति गर्ने धोको रहेको तर यो काम एक्लो प्रयासले प्रयासले मात्रै सम्भव नभएको थापाले बताउनुभयो । “स्थानीय सरकारले सहयोग गरे जैविक उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्न सकिन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।
Previous Previous post: मजदुरको ज्याला लुटेर फरार व्यक्ति ९ वर्षपछि पक्राउ
Next Next post: आजसम्म चुनाब जित्न नसकेका श्रेष्ठ मन्त्री ताक्दै : २ पटक जित्ने किराँती ‘पाखा’ लाग्दै !
चेतना सहकारीकाे लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी ३ दिने तालीम सुरु
बाबुद्वारा छ महिने छोराको हत्या !
दशैं आशिर्वाद फोनबाट लिन आग्रह : बाहिर हिड्ने कोरोना संक्रमितलाई ६ महिने जेल